डाक्टर अनुप बास्तोलाको सुझाव–कोरोना संक्रमण सकिएको छैन सावधानी अपनाऔं « Sansar News -->
डाक्टर अनुप बास्तोलाको सुझाव–कोरोना संक्रमण सकिएको छैन सावधानी अपनाऔं
९ चैत्र २०७७, सोमबार १३:२२
शु्क्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका डाक्टर अनुप बास्तोलाले नेपालमा कोरोना संक्रमण सकिएको भनेर ढुक्क भएर बस्ने अवस्था नरहेको भन्दै सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेका छन् ।
आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि पुनः सावधानी अपनाउन आग्रह गर्दै देशभर भीडभाड हुने कुनै गतिविधि नगर्न भन्दै सामाजिक÷भौतिक दूरी कायम राख्न, मास्कको अनिवार्य प्रयोग र साबुन पानीले हात धुन तथा सेनिटाइजर प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको अवस्था डा वास्तोलाले सामाजिक संजाल फेसबुकमार्फत् यस्तो अनुरोध गरेका हुन् ।
‘झट्ट सुन्दा\_हेर्दा धेरैलाई यो फेरि बन्देज किन लगाउनुपर्ने भन्ने लाग्दो हो । अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै हामी जसरी फुक्काफाल हिँडिरहेका छौं र जोखिम कम हुँदै गएको महसुस गरेका छौं, यस्तो बेला फेरि किन सावधानी अपनाउनु भन्ने लाग्नु स्वभाविक हो । तर, यसको कारण छ ।’ उनले लेखेका छन् ।
पछिल्लो समय युरोपेली देश मात्र नभएर छिमेकी देश भारतमा पनि कोरोना संक्रमणको नयाँ अध्याय शुरु भएको छ भन्दा फरक पर्दैन भन्दै डा. वास्तोलाले त्यस्तै असर नेपालमा पनि पर्न सक्ने बताएका छन् ।
‘किनकि, हालै मेरो जानकारीमा आएको एउटा घटनाले झस्काएको छ । गत फागुन ७ गते एउटा होटलमा ५० जना जतिको जमघट भयो । हलमा हावा आउने–जाने ठाउँ थिएन । हलमा भित्रिने र बाहिरिने एउटै ढोका मात्र थियो,’ उनले भनेका छन् ‘जमघट र खानपिन साँझ ६ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म (५ घण्टाजति) चल्यो । त्यसको एक सातापछि त्यही भेटघाटमा पुग्नु भएका एक व्यक्ति ज्वरो, खोकी र सास फेर्न समस्या भएपछि टेकू अस्पतालमा भर्ना हुनुभयो ।’
डा. वास्तोला थप्छन्
‘उहाँमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिनुका साथै निमोनिया भइसकेको थियो । पाँच दिनको उपचारपछि उहाँ निको भएर घर फर्किनु भयो । तर, अत्याउने किसिमको तथ्यांक त यो आयो कि, त्यो जमघटमा पुगेपछि पीसीआर गरेका ४० मध्ये १९ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखियो, जसमध्ये ७ जना अस्पताल भर्ना हुनुभयो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि पुनः सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै…
Posted by Bastola Anup on Sunday, March 21, 2021
यसले कोरोना भाइरसको संक्रमण फरक ढंगले हुँदैछ कि भन्ने आशंका बढाएको छ । यो भाइरस कति संक्रामक किसिमको होला भनेर चिन्ता लिन जरुरी छ । त्यसैले तपाईंहरु मनन गर्नोस्, मापदण्डको पालना कत्तिको आवश्यक हो । कृपया भोजभतेर, भीडभाड सकेसम्म नगरौं । मापदण्ड पालना गरौं ।’